Wax badan ka ogow labada nooc ee doorasho oo ay shaacisay Xaliimo Yarey & Xilliga la qabanayo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wax badan ka ogow labada nooc ee doorasho oo ay shaacisay Xaliimo...
Wax badan ka ogow labada nooc ee doorasho oo ay shaacisay Xaliimo Yarey & Xilliga la qabanayo
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Guddiga Maxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey) oo maanta khudbad la sugaayay ka jeedisay fadhi uu lahaa baarlamanka Soomaaliya ayaa ka hadashay doorashada la filayo in ay ka qabsoonto Soomaaliya.
Xaliima Yarey ayaa soo bandhigtay laba hab oo ay sheegtay in doorashadu ay ku qabsoomi karto oo kala ah habka Diiwaangelinta Casriga ah ee biometric iyo habka diiwaan-gelinta gacanta.
Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in habka labaad oo ah habka diiwaangelinta gacanta uu yahay mid ka waqti iyo qarashba yar habka koowaad. Habkan ayaa haddii la qaato waxa uu guddiga doorashadu u baahnaan doonaa muddo 9 bilood oo dheeri ah oo ka bilaabaneysa July 2020-ka illaa March 2021-ka.
Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa muddo xileedkiisu waxa uu ku egyahay bisha October ee sanadkan, halka kan madaxweynuhuna uu dhamaanayo bisha February ee sanadka danbe.
laba nooc oo doorasho ah
Xilliga la qabanayo